Kante + Jorginho = Khasaaro – Gool FM
Kante + Jorginho = Khasaaro
Byare July 18, 2018
(England) 18 Luulyo 2018. Chelsea ayaa sameysay saxiixeedii ugu horreeyay ee Xagaaga kaddib markii ay adduun dhan 57 milyan ay Napoli kala soo saxiixatay xiddigii ay kadaba dhimaneysa Manchester City ee Jorginho.
Laakiin khabiirka ciyaaraha ee iminka sida joogtada ah uga howl gala hilinka caanka ah ESPN ee Stewart Robson ayaa sheegay in Kante iyo Jorgingo ay dhibaato ku noqon doonaan Blues maadaama ay hal boos ka wada ciyaaraan.
Kante ayaa saddex sano uu joogay Premier League wacdaro wayn ka dhigay, Leicester City ayuu si lama filaan ah ugu gacan galiyay horyaalka, isla sanadkii xigay wuxuu ku biiray Chelsea uu iyana la qaaday Premier League, xagaagii tagayna wuxuu la qaaday FA Cup, iminkana xulka Faransiiska ayuu ka caawiyay Koobka Adduunka.
Xiddiga reer France ayaa waxaa ku dagaalamaya Barcelona iyo PSG, Robson ayaana qaba in sababta loo keenayo Jorginho ay tahay in Kante la iibiyo.
“Ciyaaryahan fadhiya labada daafac ee dhexe hortooda isla markaana isku dayaya inuu kubbada dalbado,” Robson ayaa sidaa yiri.
“Ma dhahayo waa ciyaaryahankii qadka dhexe ee ugu daafaca fiicnaa ee aad ebid aragto.
“Waxa aan ka walaacsanahay waa, haddii uu booskaas ka ciyaaro Jorginho- Muxuu sameyn doonaa Kante? Miyuu tagayaa? Miyay Chelsea ogtahay inay iibinayaan isaga?
“Iima muuqato labada oo wada ciyaaraya. Dhibaato wayn ayay midaa ku tahay taageerayaasha Chelsea.”.
Kadib markii looga adkaaday saxiixa Alisson Becker, Chelsea oo markaan doonaysa Donnarumma
Ciyaartoyda xulka France oo si gaar ah u booqday qoyska N'Golo Kante (MUUQAAL)